जाँदाजाँदै के भने दाहालले ? – Sajha Bisaunee
जाँदाजाँदै के भने दाहालले ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो १० महिनाको छोटो अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रले जितेको बताएका छन् । दाहालले आफ्नो कार्यकालमा पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भएर देशले जितेको बताएका हुन्।
‘मैले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा निराशा बाँड्नेहरुले देश राजनैतिक र संवैधानिक शुन्यतामा जाने तर्क गरिरहेका थिए’, उनले भने,‘उल्लासमय ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समग्र राष्ट्रले जितेको छ।’
त्यस्तै, दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा फास्ट ट्राक, हुलाकी मार्ग र ओबिओआर के हुन्छ भनेर सोध्नेलाई पनि जवाफ दिन सफल भएको बताएका छन्।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टममा उभिएर सोधेका थिए, फास्ट ट्र्याक के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भएको १० महिनापछि प्रचण्डले ओलीले सोधेको प्रश्न मात्र सम्झिएनन्, जवाफ पनि दिए । बुधबार देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई आफूलाई संसदमा सोधिएका प्रश्नहरु सम्झिए ।
त्यसबेला सोधिएको प्रश्न जायज भएपनि सोध्नेहरुको नियत सही नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले भनेका छन्, ‘फास्ट ट्र्याकलाई लिएर त नियोजित प्रचार नै गरियो । आज म ती प्रश्नहरुको जवाफ दिन चाहन्छु ।’
आफ्नो सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको ग्यारेन्टी गरेको प्रचण्डले बताए । लामो समयसम्म राजनीतिक दाउपेचमा मात्र सीमित रहेको फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई बनाउने दिने निर्णय भएको भन्दै उनले भने, ‘केही दिनमा म शिलान्यास गर्दैछु ।’
उनले लामो समयदेखि बन्न नसकेको हुलाकी मार्ग पनि तीव्र गतिमा बनिरहेको बताए
‘म प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार थिएँ, एकथरीले उत्तेजनापूर्वक फास्ट ट्राक के हुन्छ, हुलाकी मार्ग के हुन्छ, ओबिओआर के हुन्छ भनेर निक्कै उत्तेजनापूर्वक सोधेका थिए’, उनले भने,‘प्रश्न गलत थिएनन्, सोध्नेको नियत गलत थियो, आफूप्रति विश्वास गर्न नसक्नेहरुले अरुलाई पनि विश्वास नगर्ने रहेछन्।’
दाहालले ओबिओआर मा हस्ताक्षर गरेर, हुलाकी मार्गका काम अघि बढाएर र फास्ट ट्राक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर आफूले ती प्रश्नहरुको जवाफ दिएको बताएका हुन्।
सोही सम्बोधनकै क्रममा उनले पदबाट राजीनामा समेत घोषणा गरेका छन् ।
प्रकाशित मितिः १० जेष्ठ २०७४, बुधबार १६:४९